बिर्तामोडको फोहोरबाट अब मोहर बनाइनेः उपप्रमुख प्रसाईं (अडियोसहित) | अन्तरवार्ता | साझामन्च
प्रकाशित मिति : २०७४ ,पौष , १५ 10:19:18
मुआव्जा दिने निर्णय भएको छैन ।। वास्तविक सुकुम्बासीको पहिचान गरी नगरबासी बनाइने ।।
झापाको बिर्तामोड नगरपालिका सामरिक महत्वको क्षेत्र हो । पूर्वी नेपालको प्रमुख शहरका रुपमा स्थापित र विकसित बन्दै गएको सो नगरपालिका अनारमनी, गरामनी र चारपाने गाविस गाभेर बनाइएको हो । मेची अञ्चलका ४ वटा जिल्लाका लागि मुख्य बजार रहेको बिर्तामोडलाई कस्तो शहर बनाउने ? गत असारमा सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनबाट नगर कार्यपालिकामा निर्वाचित नेतृत्व के गरिरहेको छ ? यिनै प्रश्नहरुको सेरोफेरोमा रहेर बिर्तामोड नगरपालिकाका उपप्रमुख पवित्रा महतारा प्रसाईसँग साझामञ्चले गरेको वार्तालाप ।
बिर्तामोड नगरपालिका अहिले के गरिरहेको छ ?
धेरै कामको शुरुवात गरिसकेका छौं । विकास निर्माणका काम अन्तरगत सडकमा भएका अतिक्रमण हटाउने र बाटो विस्तार गर्ने कार्यसहित निर्माणलगायतका काम शुरु गरेका छौं । नगरपालिका नयाँ भएका कारण वडा कार्यालयहरुको स्थापना गर्न पनि समय लाग्यो । कर्मचारीहरुको संख्या कम छ, व्यवस्थापन गर्न पनि कठिनाई भइरहेको छ । फेरि बीचमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनका कारण योजनावद्ध कामहरु सुरु गर्न केही कठिनाई पनि भएको थियो ।
निर्वाचित भएको ५ महिना बितेको छ । नगरबासीले महशुस गर्ने के गरी तपाईं निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुले कुन काम गर्नुभयो ?
बिर्तामोड धेरै पछि परेको र विभिन्न ठाँउहरुबाट बसाईंसरी आएकाले जनघनत्व पनि बढ्दै गएको छ । पुरानो ठाउँ भए पनि धेरै पछि मात्रै नगरपालिका घोषणा भएकाले काम गर्न धेरै अप्ठ्याराहरु छन् । एउटा दुईवटा काम गरिहाल्दा जनताले महशुस गर्ने खालका काम गर्न केही समय लाग्छ । जस्तै फोहोरमैलाको विषयमा काम गर्न अत्यन्त अप्ठ्यो भइरहेको छ ।
फोहोरमैला व्यवस्थापन गर्न धेरै ठाउँ अवलोकन गरे पनि, धेरैवटा बैठक बसे पनि यो समस्यालाई अन्त्य गर्न अहिलेसम्म सफल भएका छैनौं, यो दुखको कुरा हो । तर अब तीनवटा नगरपालिका कनकाई, अर्जुनधारा र बिर्तामोड मिलेर फोहोर व्यवस्थापनको उद्योग सञ्चालन गर्ने हामी तयारीमा लागेका छौ । यसका लागि कनकाई नगरपालिकामा दुई बिगाहा क्षेत्रफल जमिनको व्यवस्थापन गरिएको छ । अब तीनवटै नगर क्षेत्रमा उत्पादन हुने फोहोरमैलाको स्थायी व्यवस्थापनको काम गर्ने अन्तिम तयारीमा रहेका छौं । तीनवटै नगरपालिकामा उत्पादन भएका फोहोरबाट एकीकृत प्रयास गरी मोहर उत्पादन गर्ने योजना बनाइएको छ ।
अहिले बिर्तामोडमा सडक अतिक्रमण हटाउने भन्दै डोजर आतंक मच्चाइएको छ । सडक आसपास निजी जग्गामा बनाइएका भौतिक संरचना पनि भत्काईंदै छ । राज्यले उपलब्ध गराएको धनिपूर्जा अनुसारको जमिन र सो वापत बर्सेनी मालपोत तिर्दै आएका सम्बन्धित धनीले यसरी आफ्नो सम्पत्ती बाटोमा पारिँदा उनीहरुले मुआव्जा पनि पाउँछन् कि ?
मुआव्जा दिने निर्णय हालसम्म भएको छैन । यो चाहिँ सरकारले नीति बनाएर काम गर्नुपर्छ । चुनौतीलाई सामना गर्दै नगरबासीकै समन्वयमा समृद्ध सहर निर्माण गर्ने नगरबासीले दिएको जिम्मेवारीलाई उहाँहरुसँगकै समन्वयमा हामीले काम गर्ने हो । राज्यले निजी संरचना भत्काउँदा क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो । तर जनप्रतिनिधिहरुलाई पनि काम गर्न गाह्रो र अप्ठ्यारो छ । हिजो विजय गराएर पठाएका जनप्रतिनिधिहरुको काम के छ, काम गरेनन् भन्ने जनगुनासो आइरहन्छन् । सँगै काम गर्न पनि उत्तिकै चुनौति छ । बनिएका संरचना भत्काउँदा राज्य नै जवाफदेही बन्नुपर्छ ।
योभन्दा अघि दशैँको बेला सडक विस्तार कार्य शुरु गरे पनि चाडपर्वको बेलामा व्यवासायीहरुले लाखौं रुपैयाँ लगानी गरी शुरु गरिएको दशैं बजारलाई असर पर्ने भन्ने व्यावसायीकै आग्रहलाई सम्बोधन गरेर सडक अतिक्रमण हटाउने कार्य रोकिएको थियो । अहिले उद्योग वाणिज्य संघसँग पनि समन्वयमा अतिक्रमण हटाउने काम भइरहेको छ । सबै राजनीतिक दल, नगरबासी, व्यवसायी र नागरिक समाजको साथ र सहयोग नगरपालिकाले पाउँछ भन्ने हामीले अपेक्षा गरेका छौं । सबैको साथ र सहयोगले यस कार्यलाई पूरा गरेर मात्र अरु विकासको काम अगाडि बढाउँछौं ।
त्यसो भए नगरबासीले बिर्तामोडका सडकको धुलोबाट कहिले छुटकारा पाउँछन् नि !?
विकास निर्माण भन्ने कार्य जादुको छडी जसरी रातारात हुने होइन, आजको भोलि एकैचोटी सबै काम हुन सक्दैन । यो सबैले जानेको बुझेको कुरा हो । तर पनि मूल सडकको आसपास सडक अतिक्रमण हटाउँदा उत्पादन हुन थालेको र पिचरोड भत्किएर उत्पन्न धुलोको समस्या समाधान छिट्टै गरिनेछ । हरेक कामको कार्यअवधि हुन्छ, हाम्रो योजना अनुसार काम कारबाही अगाडि बढेमा यो आर्थिक वर्ष भित्रै धुलोबाट छुट्कारा मिल्नेछ । अन्य देशहरुमा छिटोछिटो काम भएका छन् तर नेपालमा भने प्रविधि साथै ठोस नीतिको अभाव र पर्याप्त बजेट अभावमा सोचेको समयावधिमा काम पूरा हुन सकिरहेको पाइँदैन । तर हामी नयाँ पद्धतिको विकास गर्छौ ।
चुनावमा भोट माग्दा सुकुम्बासीलाई नगरबासी बनाउने तपाँईहरुको नारा कहाँ पुग्यो ।
यो पक्रिया लामो हुन्छ । ५ वर्ष भित्रमा यी सबै कामहरु पूरा गर्छौं । यसका लागि केन्द्रीय सरकारबाट नीति नियमहरु बनेर आउने हो र त्यसलाई हामी कार्यान्वयन गर्छौं । वास्तविक सुकुम्बासी पहिचान गर्न सकिएको छैन । सुकुम्बासी बन्नेहरु कति ठाउँमा घरभाडामा लगाएर बसेका पनि भेट्यौं । धनाढ्यहरु पनि सुकुम्बासीको नाममा हुकुम्बासी बनिरहेका छन् । त्यसका लागि पहिलो चरणमा वास्तविक सुकुम्बासीलाई पहिचान गर्छौं । हुकुम्बासीहरु स्वतः पाखा लाग्नुपर्नेछ ।
देशभरको कुनै पनि स्थानमा व्यक्तिको र परिवारको जमिन नभएको र कम्तीमा १५ वर्षभन्दा अघिदेखि यतैकतै नगर क्षेत्रमा बसेर दुखजिलो गर्दै आएकाहरुको लगत संकलन गरिनेछ र उनीहरुलाई नगरबासी बनाइनेछ । उनीहरुले पनि स्वच्छ खानेपानी, बिजुली, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा आर्जनको अवसरलगायत आधारभूत आवश्यकताबाट बञ्चित हुनुहुँदैन । तिनीहरुको स्वास्थ्य राम्रो भएन भने नगरपालिका पनि स्वस्थ्य हुनै सक्दैन, त्यही कुरालाई मध्यनजर गरेर काम गरिरहेका छौं ।
तपाईं नगरपालिकाको न्यायाधिकारी पनि हुनुहुन्छ । अहिलेसम्म कस्ता कस्ता मुद्धा आए र कति फच्छ्र्यौट गर्नुभयो ।
विशेष गरेर फौजदारी मुद्धा, घरायसी हिंसा र यातनाजस्ता विषयका मुद्धाहरु आउने गरेका छन् । तिनीहरुलाई सकेसम्म छलफलबाटै निराकरण गर्ने गरेका छौं । कतिपय चाहिँ अदालत जानुपर्ने खालका छन् भनेमात्र सहज तरिकाले अदालतसम्म पुर्याउने र फौजदारी मुद्धालाई इलाका प्रहरीमार्फत् किनारा लगाउँदै आएकी छु ।
नगरपालिकाका कर्मचारीहरुको व्यवहार कस्तो पाउनु भएको छ ? चुस्त ढङ्गले काम गरिरहेका छैनन् भन्ने जनगुनासो सुनिन्छ ।
कहिले काहीँ त्यस्ता गुनासो पनि आउँछन्, आएका पनि छन् । त्यसलाई हामीले अनुगमन गर्ने र मूल्याङ्कन पनि गर्ने गरेका छौं । २० वर्षदेखि कर्मचारीतन्त्रले हावी भएको मुलुकमा जनप्रतिनिधिहरु एकैचोटी आउँदा पद्धतिमा ल्याउन समय लाग्छ नै । तर कर्मचारीहरुसँग काम गर्ने कुरामा त्यस्तो असहज परिस्थिति छैन । हिजोको दिनमा जस्तो आँखामा छारो हाल्ने काम मात्र गर्दैनौं, कर्मचारीलाई चुस्त राखेर दिगो विकासका लागि काम गर्ने कुरामा हामी कटिबद्ध छौं ।
तपाईंहरुले चुनावी घोषणा पत्रमा उल्लेख गर्नुभएका के के काम चाहिँ यो अवधिमा गर्नुभयो वा थालनी गर्नुभयो र अब के हुँदैछ ?
घोषणपत्रमै उल्लेख भए अनुसारको हामीले काम गर्ने हो । मनोवैज्ञानिक रुपमा उठेका कुरालाई पछि सम्बोधन गर्छौं । नगरपालिकाको जिम्मेवारीमा आउनुभन्दा पहिले हामी एउटा पार्टीका जिम्मेवार कार्यकर्ता थियौं । अब हामी मतदानको पक्रियाबाट विजयी भएर नगरपालिकाको जिम्मेवारीमा आएपछि नगरबासीका साझा भएर काम गर्नुपर्छ । हाम्रो घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएका र विपक्षी साथीहरुले उठाएका पनि कतिपय राम्रा प्रस्तावहरु पूरा गर्न जनताले हामीलाई ५ वर्षको समय दिएका छन् । यो अवधिमा नगरबासीले विकास र परिवर्तनको महशुस गर्न पाउनेछन्, अहिलेलाई यत्ति नै भनौं ।
अन्त्यमा नगरबासीलाई केही भन्नुहुन्छ ?
तपाईंहरुसँग गरेका प्रतिवद्धताहरु हामी अवश्य पूरा गर्छौ । धैर्य गर्नुभएको छ, जसका लागि म आभार प्रकट गर्छु । २० वर्षपछि भएको निर्वाचनबाट यहाँहरुले धेरै अपेक्षा गर्नु, र छिटोछिटो काम होस् भन्ने चाहनु ठिकै हो । भरखरमात्र तीन तहकै निर्वाचन सम्पन्न भएको छ । नीति निर्माण गर्ने तहको निर्वाचन भएकाले अब संसदले पूर्णता पाउने, नयाँ सरकार गठन हुने प्रक्रियामा छ ।
मैले माथि पनि भनेँ, कुनै पनि काम जादुको छडी हल्लाए जसरी हुन सक्दैनन् । नीति, नियम, कानून, बजेट र समयावधिका आधारमा हाम्रा अपेक्षाहरु पनि पक्कै पूरा हुनेछन् । म प्रतिवद्ध छु, नगरबासीले साथ र सहयोग दिनुभयो भने घोषणापत्रमा उल्लेख भएका काममात्र होइन, देशकै नमूना नगरपालकिा निर्माण गर्न योजनाहरु ल्याइनेछ । सबै राजनीतिक दलहरुसँग कार्यगत एकता गर्दै दिगो आर्थिक विकासका निम्ति अवधारणासहितको कामहरु हुनेछन् । केही समय पछि नै यसको खाका तपाईं सामू आउनेछ ।
प्रस्तुतिः सरोज पौडेल